Iimpawu, ukuvelisa kwakhona kunye nokukhula kwe-algae eluhlaza | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izityalo ze-Aquarium
Kumanqaku angaphambili sibonile nzulu ukuba ulwelwe obomvu. Namhlanje sikuzisa elinye inqaku elihambelana nalo. Kule meko siza kuthetha ngayo ulwelwe oluhlaza. Umsebenzi wabo okhethekileyo kukuba banechlorophyll yazo zombini ii-ao kunye ne-b. Le nyaniso yile yenza ukuba i-algae eluhlaza ibe nalo mbala. Kukho iintlobo ezingaphezu kwama-7.000 ze-algae eluhlaza kwihlabathi jikelele. Zisasazwe phakathi kolwandle, emanzini aphilileyo okanye emhlabeni, nangona uninzi lunamanzi amatsha.
Ngaba uyafuna ukwazi ngokunzulu zonke iimpawu kunye nendlela yokuphila ye-algae eluhlaza? Qhubeka ufunda kwaye uyakufunda yonke into 🙂
2 Ukuzaliswa kwe-algae eluhlaza
3 I-algae eqaqambileyo
4 Isizathu sokuba bavele kwi-aquarium yakho
I-algae eluhlaza, njengazo zonke izinto eziphilayo ezine-chlorophyll, sBayakwazi ukuvelisa amandla ukuze baphile kwifotosinthesisi. Icandelo eliyimfuneko ukuze baphile kukukhanya kwelanga. Njengoko sinokucinga, ulwelwe lwaselwandle lunale nyani inzima ngakumbi, kuba imitha yelanga incipha ngobunzulu.
Ungcoliseko lwamanzi luyalinciphisa inani lokukhanya kwelanga elingena kwindalo yolwandle kwaye, ke, ulwelwe oluhlaza alunako ukufota kunye nokufa. Olu hlobo lwe-algae lunokuhlala phantse kuyo nayiphi na i-ecosystem kuba inamandla okusinda. Inyaniso yokuba yi-10% kuphela yazo zonke izinto eziluhlaza ezilwandle eziselwandle ezinxulumene nokukwazi kwabo ukwenza ifotosinthesisi kunye nemfuno yabo yokukhanya kwelanga.
Xa sisiya elwandle, sinokufumana iintlobo ezininzi ze-algae eluhlaza. Njengoko sisiya ezantsi kubunzulu, sibona okuncinci nokuncipha njengoko ukukhanya kwelanga kuncipha. Nangona sinokufumana ulwelwe olunqunyanyisiweyo emanzini okanye ulwelwe lobukhulu obuncinci, uninzi lwazo lusezantsi emazantsi olwandle.
Ukuveliswa kwakhona kwe-Algae kunokuba ngokwesini kunye nokuhlaselwa ngokwesondo. Xa kufikwa ekuzihlalutheni, sinako ukwahlula iziqu, amagqabi kunye neengcambu njengesityalo esiphakamileyo.
Ukuzaliswa kwe-algae eluhlaza
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-algae inokuvelisa kwakhona ngokuqhekeka kunye nokwabelana ngesondo ngeendlela ezahlukeneyo. Siza kuhlalutya nganye nganye:
Hologamy: luhlobo lokuvelisa olujongwa kuphela kwi-algae ye-unicellular. Ukuveliswa kwakhona kuqulethwe kukuba i-alga ngokwayo isebenza njenge-gamete kwaye idibanisa enye i-gamete.
Ukudibana: luhlobo lokuvelisa okwenzeka kuphela kwi-algae ene-filamentous. Kuyo, ezinye i-algae zisebenza njengamadoda kwaye ezinye zinje ngamabhinqa. Ngale ndlela, bayakwazi ukujoyina imisonto kunye nokwenza iityhubhu zomanyano apho umxholo wokuzala udlula khona. Xa inkqubo igqityiwe, i-zygospore yenziwa njengesiphumo. Sisiporho esihlala sifihlwe kude kube iimeko zobume bendalo zilungele ukuntshula kwazo apho zenza intambo entsha.
Isicwangciso: Luhlobo lokuvelisa kwakhona apho iigetethi zeselfowuni zisebenza khona. Zombini iigetet ziqulethe i-flagella evumela ukuba bahambe kwaye baphinde bazalane.
Iitshomi: Iyafana neyangaphambili, kodwa ngeli xesha sifumanisa ukuba i-gamete yabasetyhini ayisebenzi. Njengoko ingenayo i-flagella, ayinakushukuma kwaye ifuna ukuveliswa kwangaphandle.
I-algae e-filamentous inomdla woluntu, njengoko uninzi lwazo lusetyenziswa kwi-aquariums. Zombini zineklorophyll a kunye b kunye neentlobo ngeentlobo zombala ezifana neecarotenes kunye nexanthophylls. Siyifumana ikakhulu kwiindawo ezinamanzi acocekileyo, nangona inokubonakala ihlala kwimimandla yaselwandle. Oku kuyenza ibe sisityalo esinokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo kwi-aquarium yakho.
Babizwa ngokuba yi-filamentous algae kuba baneeseli ngohlobo lwemisonto efana neenwele ezixineneyo. Kwezinye ii-aquariums kukho ukwakheka kohlobo lwe-algae eluhlaza engathandekiyo (engafani nokhula kwiigadi) kwaye ibizwa ngokuba yiCladophora. Ungazibona ngokulula kuba zikhangeleka njengeqela lemicu emnyama eluhlaza kwaye zikhula zilungelelaniswe nakwimigca okanye ezinye izityalo ezibangqongileyo.
I-Filamentous algae ifuna ukukhanya okukhulu kunye nezondlo ukuze zikhule kakuhle. Bafuna isixa esikhulu senitrate kunye nefosfathi equlethwe ngamanzi. Ukuba ufuna ukuqinisekisa imeko elungileyo kunye nokukhula kwe-algae eluhlaza kwi-aquarium yakho, qiniseka ukuba banexabiso elifanelekileyo lezi zimbiwa.
Ezi algae zinokuba sisitshabalalisi ukuba kukho izakhamzimba ezigqithileyo. Ingonakalisa amanzi ngenkqubo eyaziwa ngokuba kukukhululwa kwamanzi. Kukukhula okubaxekileyo ngenxa yokugqithisa kwezondlo emanzini ezikhokelela ekunciphiseni ubungakanani bokukhanya okufikelela emazantsi ngenxa ye-algae egqithileyo. Xa besifa baqala ukubola kwaye benze imeko ebolileyo. Oku kubizwa ngokuba kukususwa kwamanzi.
Isizathu sokuba bavele kwi-aquarium yakho
Unokuba nedama kwaye ukusuka kusuku olunye ukuya kwi-algae eluhlaza elandelayo iya kuqala ukwanda. Le meko ibangelwa zizizathu ezahlukeneyo. Enye yezona zinto ziphambili kukungalingani phakathi kwesixa se-nitrate kunye ne-phosphate emanzini. Ngokubanzi, zihlala zininzi ii-nitrate kunee-phosphates. Ukungabi namaxabiso afanelekileyo kubangela ukuba ezi algae zikhule emanzini. Ukuthintela le meko kufuneka silawule kakuhle amanqanaba ezityalo esizibeka echibini.
Enye ingxaki ebangela ukukhula okungafunekiyo kwe-algae eluhlaza yile ukuhluza okuncinci okanye umthwalo webhayolojiukuya. Le meko yenzeka xa Iifilitha azinawo amandla okugcina amanzi akwimeko entle. Kungenxa yokuba i-aquarium ayinamandla okwaneleyo okucoca isixa esikhulu samanzi okanye isixa esikhulu kakhulu okanye ngenxa yokuba ithintelwe / yonakele. Ukuthatha lo mbandela, kufuneka sijonge amandla afunekayo asebenza kuwo. Kufuneka yaziwe ukuba xa kufakwa isihluzo emanzini, Amandla ancitshiswe ngama-40%. Ke ngoko, kuyimfuneko ukuthenga isihluzo esinamandla aphezulu.
Ukuba i-aquarium inokukhanya okuthe ngqo kwelanga okanye, ngokuchaseneyo, kukusilela kwesibane, inokuba yimeko yokukhula okungafunekiyo. Isixa sokukhanya esingena kufuneka silinganiswe kakuhle kwaye silunge kwaye siyimfuneko.
Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso zikunceda ukuba ufunde ngakumbi nge-algae eluhlaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izityalo ze-Aquarium » I-algae eluhlaza